Ukushaya iBucs neWydad sekubuyise umgqigqo kwiChiefs - Impempe
Ukushaya iBucs neWydad sekubuyise umgqigqo kwiChiefs
April 5, 2021 Impempe.com
UKgotso Moleko noLeonardo Castro beKaizer Chiefs
Ukuwina imidlalo emibili enzima nobekungabhekiwe ukuthi iKaizer Chiefs ingadlula ingenasibazi kuyo sekubuyise umuzwa wokunqoba kuleli qembu laseNaturena. Amakhosi ashaya i-Orlando Pirates ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership, aphinda neWydad Athletic emdlalweni weCAF Champions League ngenduku efanayo ngoMgqibelo.
Manje umgadli weChiefs, uLeonardo Castro uthi osekusele wukuthi bawubambe bengabe besawudedela kuze kuyophela isizini lo mgqigqo.
“Ukuwina lenmidlalo sekusibuyisele umuzwa wokunqoba. Kube yinto enhle kakhulu ukuthi siyiwine le midlalo ngoba sesizoya emidlalweni elandelayo sigcwele ukuzethemba,” kusho uCastro.
Emdlalweni olandelayo, Amakhosi abuyela kwiligi la ezobhekana khona neStellenbosch eFNB Stadium ngoLwesibili ngo 5 ntambama. Ayakudinga ukuqoqa amaphuzu kulo mdlalo ukuze angaze azithole esebalwa namaqembu abangwa nezibi kulesi sigaba.
“Umdlalo olandelayo ‘ngowamanqamu’, yileyo ndlela okumele siwubuke ngayo. Kumele siwunqobe ukuze senyuke. Kumele umdlalo nomdlalo siye kuwo ngokuzinikela ukuze kuphele isizini sisesimweni esihle.
“Sonke siyazi ukuthi inzima kanjani iStellenbosch. Kuzomele sigxile endleleni yethu yokudlala ukuze siqhubeke nomgqigqo esesiwubambile.”
Uma edlalisiwe kwiStellies, uCastro uzobe edlala umdlalo wakhe ka-99 kuMakhosi kanti uthi useluleme futhi ukulungele ukudlala uma nje umqeqeshi emnika ithuba.
“Sengilungile uma umqeqeshi engidinga. Sengikubheke ngabomvu ukubuyela ensimini. Ngifuna ukwelekelela iqembu, ngizinikele ngawo wonke amandla ami,” kuphetha lo mdlali odabuka eColombia.
Previous Previous post: Seyiphinde yakhalela ku-Eymael iChippa
Next Next post: IStellies ingayinqamula injabulo yeChiefs